ကိုဗစ်ကာလ မိခင်နို့ရည် ဘယ်လိုတိုက်ကျွေးမလဲ? -
ဒီ Covid ကာလအတွင်းမှာ နို့တိုက်မိခင် သို့ မကြာခင်ကလေးမွေးဖွားတော့မယ့်နို့တိုက်မိခင်လောင်း တွေအနေနဲ့ မိမိကလေးငယ်ကို ဘယ်လို နို့တိုက်ကျွေးရမလဲဆိုပြီး ပူပန်နေမှာ သဘာဝပါပဲ။
ကမ္ဘာအဝှမ်းမှာတော့ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးဖို့ကို ထောက်ခံနေကြတာ မျက်မြင်ပဲဖြစ်မှာပါ၊ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးတဲ့အတွက်ကြောင့် ကလေးငယ်ကို Covid-19 ပိုးကူးစက်သွားစေတဲ့ကိစ္စမျိုး အခုချိန်ထိ ရှာလို့မတွေ့ကြသေးပါဘူး။ မိခင်နဲ့ကလေး အသားချင်းထိကပ်ပြီး နို့တိုက်ကျွေးခြင်းဖြင့် ကလေးငယ်ကို ကြီးထွားစေပြီး ကလေးကျန်းမာရေးအတွက်လဲ ကောင်းကျိုးတွေရရှိလာစေမှာပါ။
၁. Covid ကာလအတွင်း ဆရာဝန်တွေရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တဦးနဲ့တဦး ခပ်ခွာခွာနေဖို့ဆိုရင် မိခင်အနေနဲ့ကော ကလေးကို နို့တိုက်ကျွေးသင့်လား?
-တိုက်သင့်ပါတယ်၊ နို့တိုက်ကျွေးလို့ ကလေးငယ်ကို Covid ပိုးကူးစက်စေတဲ့ ကိစ္စမျိုး ယနေ့အချိန်ထိ မရှိသေးပါဘူး။ မိခင်နို့ကရတဲ့ ပဋိဇီဝပစ္စည်းတွေက ကလေးငယ်ကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေပြီး ရောဂါပိုးများစွာထံမှကာကွယ်ပေးပါတယ်၊ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းဟာ မွေးကင်းစကလေးငယ်တွေနဲ့ ၁နှစ်အောက်ကလေးတွေရဲ့သေဆုံးမှုနှုန်းကိုလျော့ကျစေပြီး နို့တိုက်မိခင်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလဲအထောက်အကူများစွာပြုနေပါတယ်။
၂. မိခင်နို့မှတဆင့် ကလေးငယ်ကို Covid ရောဂါပိုး ကူးစက်စေနိုင်သလား?
-ယနေ့အချိန်ထိတော့ Covid-19 virus ကို မိခင်နို့ထဲမှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိတာမျိုး မရှိသေးပါဘူး။ သုတေသီတွေအနေနဲ့လဲ Covid ရောဂါခံစားနေရ (သို့ ) သံသယ ရှိတဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေရဲ့ နို့ရည်ကနေ ဆက်လက် ရှာဖွေနေဆဲပါပဲ။
၃. Covid ရောဂါ ခံစားနေရတယ် (သို့) သံသယ ဖြစ်နေပြီဆိုရင် ဆက်ပြီးနို့တိုက်ကျွေးသင့်လား?
-ဟုတ်ကဲ့၊ အတတ်နိုင်ဆုံး ကလေးငယ်ကိုမကူးစက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေ သုံးပြီး ဆက်လက်တိုက်ကျွေးသင့်ပါတယ်။
၄. နို့တိုက်ကျွေးတဲ့ ကာလအတွင်း Covid-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးသင့်လား?
-ကျန်းမာတဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေအနေနဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးသင့်တယ်လို့ ထောက်ခံထားကြပါတယ်။
၅. ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးရင်ကော မိခင်နို့ ဆက်ပြီးတိုက်ကျွေးသင့်ရဲ့လား?
-ဟုတ်ကဲ့၊ ဆက်ပြီး နို့တိုက်ကျွေးသင့်ပါတယ်။ WHO က အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ ကာကွယ်ဆေးအားလုံးမှာ အသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ Covid ပိုးမပါဝင်တဲ့အတွက် မိခင်နို့ကတဆင့် ကလေးငယ်ကို မကူးစက်စေနိုင်ပါဘူး။
၆.တကယ်လို့ မိခင်နို့မတိုက်ကျွေးနိုင်ရလောက်တဲ့အထိ နေမကောင်းဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
-မိခင်ကို နို့ညှစ်ထုတ်စေပြီး သန့်ရှင်းတဲ့ ခွက်/ ဇွန်းတွေနဲ့ ဆက်တိုက်ကျွေးရပါမယ်။ ဒါမှမဟုတ် တခြားနို့တိုက်မိခင်ကို အကူအညီတောင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမှ မရနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ အာဟာရနို့မှုန့်ကို စနစ်တကျဖျော်စပ်ထားပြီး သန့်ရှင်းတဲ့နို့ဘူးနဲ့ တိုက်ပေးဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
၇. ကလေးငယ် ဖျားနေလို့ မိခင်နို့ တိုက်သင့်ရဲ့လား?
-ကလေးငယ်က Covid ကူးစက်ခံထားရလို့ဖြစ်စေ၊ တခြားရောဂါကြောင့် ဖျားနေသည်ဖြစ်စေ မိခင်နို့ကို ဆက်ပြီး တိုက်ကျွေးဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းဖြင့် ကလေးငယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုတက်စေတဲ့အပြင် မိခင်နို့မှာပါဝင်တဲ့ ပဋိဇီဝပစ္စည်းတွေဟာ ရောဂါကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
၈. အခုလိုကာလမှာ မိခင်အနေနဲ့ ကလေးငယ်ကို နီးနီးကပ်ကပ်နို့တိုက်ကျွေးတဲ့အချိန် ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်သင့်ပါလဲ?
-ကလေးကို နို့မတိုက်ခင် ဆပ်ပြာနှင့်ရေဖြင့် လက်ကို သေချာစွာဆေးကြောပါ ၊
နှာစေးချောင်းဆိုးလျှင် တစ်ရှူးဖြင့်အုပ်ပြီး စနစ်တကျတခါတည်း သေချာစွာ စွန့်ပစ်ပေးပါ၊မိမိ ထိတွေ့ထားသော ပစ္စည်းများ၊ မျက်နှာပြင်များအားလုံးကို သေချာစွာဆေးကြောပါ၊
တတ်နိုင်သလောက် mask တပ်ဆင်ထားပါ။
Ref: 𝗨𝗡𝗜𝗖𝗘𝗙 (Breastfeeding safely during the COVID-19 pandemic)
Oct 26, 2021 Child Health, Covid 19, Health Tips